देशैभरि झ्याप झ्याप बिजुली जाने समस्या बढ्दै, के यो अघोषित लोडसेडिङ हो ? - Nepal's No.1 News portal
देशैभरि झ्याप झ्याप बिजुली जाने समस्या बढ्दै, के यो अघोषित लोडसेडिङ हो ?
काठमाडौं, जेठ ११। पछिल्ला केही दिनयता सर्वसाधारण झ्याप झ्याप बत्ती जाँदा हैरान भएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणको फितलो व्यवस्थापनका कारण राजधानीका विभिन्न स्थानमा दैनिक जसो नै बत्ती आउने जाने भइरहेको छ । यस्तै समस्या देशका अन्य प्रमुख सहरमा समेत हुने गरेको उपभोक्ताले बताएका छन्।
देशभर दैनिकजसो बत्ती आउने जाने गरेको गुनासो आउन थालेका छन् । बत्ती जाने आउने समस्या बढे पनि यसको दीर्घकालीन समाधान गर्न प्राधिकरण असफलजस्तै देखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य भने लोडसेडिङको समस्या नरहेको दाबी गर्छन् । ‘लाइन नै सर्ट भएर ट्रान्सफर्मर पट्केर कुनैबेला बत्ती गएको हुन सक्छ तर प्रणालीमा कुनै समस्या छैन । बत्ती जाने समस्या हुँदा हाम्रो भाइबर र वाट्सयापमा तुरुन्तै सूचना आउने गरेको छ । त्यसलाई हामी तुरुन्तै समाधानसमेत गर्ने गरेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशन शाक्यले भने।
प्राधिकरणका अनुसार ११ केभी र ३३ केभीका १ सय ५० देखि २ सय किलोमिटर लामो ट्रान्समिसन लाइन भएका ठाउँहरूमा कुनै ठाउँमा रूखले छोयो, प्राविधिक समस्या आयो भने पत्ता लगाउन समय लाग्ने गरेको छ। यस्ता ठाउँहरूमा १ सय ३२ केभी लाइन नबनाएसम्म लाइन आउने जाने भई नै रहन्छ । शाक्यले त्यस्ता ठाउँमा क्षमता विस्तारका लागि समन्वय भइरहेको जानकारी दिए। यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा पूजा चँदराले लेखेकी छन्।
अख्तियारको काम कारबाही निष्पक्ष र स्वच्छ नभएको सर्वोच्चको ठहर
अपर तामाकोसी आयोजनामा आजदेखि पुनः पानी पठाइने
उपत्यकामा स्थिर रहे पनि उपत्यकाबाहिर संक्रमणदर बढ्दो